Home Wararka Al Shabaab oo sheegtay inay weerar ka geysteen gudaha dalka Kenya
Al Shabaab oo sheegtay inay weerar ka geysteen gudaha dalka Kenya
Dagaalyahano katirsan Al Shabaab ayaa weerar khasaaro geestay ka fuliyay deegaan lagu magacaabo Banisa oo kuyaala duleedka waqooyi ee magaalada Mandheera, waxaana weerarkan lala beegsaday dad halkaasi ku sugnaa.
Al Shabaab ayaa war kasoo baxay lagu sheegay in weerarkaasi ka dhacay duleedka magaalada Mandheera iyagu ka dambeeyeen, waxa ayna xuseen in weerarkaasi ku dileen labo qof oo Kenyan ah.
Dowlada Kenya ayaan wali ka hadlin weerarkan khasaaraha geestay ee Al Shabaab ka fuliyeen gudaha Kenya, waxaana howlgalo kawada deegaanka weerarku ka dhacay ciidamo katirsan milatariga iyo booliiska Kenya.
Al Shabaab ayaa maalmihii lasoo dhaaf kordhisay weerarada ay ka fuliyaan gudaha dalka Kenya gaar ahaan deegaanada hoostaga magaalada Mandheera iyo sidoo kale gobolka xeebta ee Lamu.
Previous articleRa’iisul Wasaare Rooble oo isbitaalka ku booqday afhayeenka oo qarax ku dhaawacmay.
Next articleMidowga Yurub oo walaac ka muujiyay xaaladda Soomaaliya & Saameynta howlgalka Burcad Badeeda
Kheyre iyo Farmajo oo Amar ku Bixiyey in si Degdeg ah...
Sarkaal ka tirsan Jamhuuri ah oo digniin u diray Trump